Sezidumela emansumpeni ngoMiss KZN Traditional 2017 | Eyethu News
Sezidumela emansumpeni ngoMiss KZN Traditional 2017
“Kufuneka abantu abangenazo izingane.”
Izintokazi ezinqobe lomncintiswano ngonyaka ofile.
USUZOSUKA umshikashika wonobuhle owaziwa ngo Miss KZN Traditional 2017,njengoba sekuzoqala inhlolokhono yalabonobuhle ngempelasonto ezayo.
Lenhlokhono izoba mhla zizine kuNhlolanja (February) emtapweni wolwazi edolobheni laseMgungundlovu (Bessie Head Library) ngehora leshumi nanye ekuseni nalapho kuzobe kukhethwa khona izintokazi ezizobanga lesi sicoco kowamanqamu.
Lomncintiswano kuzobe kungokwesihlanu wenzeka kulonyaka njengoba wasungulwa ngonyaka ka 2011.
Umsunguli walo mncintiswano UMnu Mbuso uthe uyazinxenxa zonke izintokazi zaseMgungundlovu ukuba ziphume ngobuningi bazo zizoveza ubuhle kanye namakhono azo.
“Sifuna izintokazi ezineminyaka ephakathi kuma 14 no 21 kanti futhi akumele kube abantu asebenabantwana kodwa asinankinga nalabo abangesizona izintombi nto uma nje bengenabo abantwana. Sifuna bagqugquzeleke ngamasiko abo kanti futhi kumele babe nolwazi ngawo. Asikhethanga ukuthi uphuma koluphi uhlanga wonke umuntu wamukelekile kodwa benze isiqiniseko sokuthi abakaze baphambana nengalo yomthetho baze bagwetshwa,” kubeka yena.
Uqhube wathi into eyenza asungule lomncintiswano ofana nalona ingoba ufuna ukuthi intsha ekhulayo igqugquzeleke ngamasiko futhi yazi imvelaphi yayo.
” Makuwukuthi uyaqaphela onobuhle abaningi abesilungu nalapho intsha yazi khona ukuthi kumele ifake amakwayi kwayi kanye nezinto zokubhukuda.Thina okwethu kuhlukile kwazise bazobe bevunulile ngemvunulo yamasiko abo nengikholelwa ukuthi kuzobagqugquzela ukuba bazi imvelaphi yabo.”
Kulenhlokhono kuzobe kukhona nosaziwayo okubalwa kubona uJessica Nkosi odlala indawo kaQondi emdlalweni Isibaya nozobe ekhuthaza intsha futhi eyigqugquzela ngokubaluleka kwamasiko.
Nakuba bekungakacaci ngesamba esizowinwa kulonobuhle kodwa uMbuso uthe bayafisa ukuthi kungabi isamba semali kuphela kodwa kube khona nemifundaze ukuze lezi zingane zizosizakala ngekusasa lazo.
Ngonyaka owedlule lesi sicoco sakhala semuka nentokazi yaseMooi River uNokwanda Mtshali.
Ofuna ukwazi kabanzi ngeminye imininingwane angaxhumana naye uMbuso kwinombolo ethi : 079 616 0059
Kuboshwe abane betholwa namasaka amahlanu ensangu ka-R70 000